Kana wakasimwa phlox: Notes webindu
Chero mudzidzi webindu pakupedzisira nezvezvaiitika mubvunzo kuti kana kuti repot phlox. Handiti izvi Maruva kusimba mune kushongedzwa yavo vari munzvimbo yokutanga kukurumbira pakati dzimwe Perennial plants pasi.
Panguva iyi mubindu netsika hwakapararira mhando dzakasiyana-siyana mwaya mavara aya. Juicy uye inopenya mavara, uyewo refu uye azere chaizvo maruva miti kuti izvi kusimba yakakurumbira pamwe Chikwata, vose nyanzvi amateurs. Uyezve, phlox zvikuru husingakwanisi tembiricha kuchinja. Zvisinei, panguva yakanyanya frosts zvichida rufu zvinomera.
Uyo anofarira, kana wakasimwa phlox, ziva kuti zvirimwa izvi ane simba zvikuru midzi. maruva avo, zvichienderana siyana, pane siyana chaizvo saizi, aunganidzwa mune panzvimbo yakakura inflorescences, richisvika ayo matatu masendimita ari dhayamita.
Nokuti kumhara phlox nyika kazhinji vakasarudzwa, zvakanaka kudzivirirwa pamhepo inotonhora uye tembiricha yakaderera. Muzhizha nzvimbo iyi zvakanyatsonaka kuti varambe unyoro uye chando rinoungana ane zvakakwana yakawanda chando, iyo anobvumira mavara kuenda achishandisa zvikuru kwazvo frosts. Phlox kukura zvakanaka mune zvishomanana mumvuri, asi zvakanakisisa kukura uye maruva ari jeka clearings.
Chero ruzivo webindu anoziva kana kuti repot phlox, ziva kuti ichi chinhu undemanding chaizvo chirimwa chinogona kukura ari murombo chaizvo ivhu zvicherwa uye zvinhu zvinokosha. Zvisinei, kupfuura zvakanaka vari kukura chiedza loamy ivhu kuti zvine mwero nourume manyowa uye mupfudze.
Kana Ndinogona replant phlox
All noruzivo vachengeti vanoziva kuti chirimwa ichi ndicho chete perennial kuti zviri nyore kuti kushivirira transplantation aine clod panyika. Kuti aite izvi, zvinyoronyoro obkopat chirimwa, nokuchenjerera kwete kukuvadza kumidzi. Zvino unofanira kutama bhora mune zvakakwana buri pre-kugadzirira, yakaorera uye nyorova. Nokuti zviri nani rooting phlox vanofanira isa fotereza zvakanaka. Vhiki shomanana, ivo zvinoda kutarisirwa webindu, zvisinei, kana ivo midzi nzvimbo itsva, zvinokwanisika kugadzirira maruva kuti kupesana.
Aninani anokumbira, kana wakasimwa phlox, vanofanira kuziva kuti izvi anogona kubereka chero zuva inodziya mwaka. Izvi zvichaita kuti nguva kusimbisa chirimwa panguva nzvimbo itsva, uye vapone chando. Chete nzira kunofanira kuitwa ose mana namashanu. Zvikasadaro chirimwa kuchawedzera zvakasimba, izvo kukanganisa maruva ayo.
Pashure murimi anoziva kana kuti repot phlox, anova kuziva nguva weboka ravo. Kazhinji nzira iyi rinoitwa pakutanga kwematsutso kana spring, asi zvinogona kuitwa muzhizha. Bush-mubereki inowanzopiwa rakakamurwa akawanda zvikamu, izvo wakasimwa munzvimbo dzakasiyana. In iyi, midzi zvinomera zvinowa- wakaputirwa nyorova jira uye kune imwe nzvimbo itsva.
Phlox - seruva kukuru runako zvichaita vashongedze chero mumunda kuti vakawanda kwemakore.
Nei mashizha kutsauka yero the currant: chinokonzera uye mabatirwo dambudziko
Handsome dzinopisa masango: Anthurium ruva
Anthurium: kuchengeta miti
Zvigwenzi Flower Guzmán
Black bhinzi - kurimwa, Photo
Cucumbers Libella F1: rondedzero siyana, kurima
Chikosoro mu pamuviri (1 izwi) pane mushonga: zano
Makemikari anoumba pfupa romunhu. Chii makemikari anoumba mafupa?
"Andalusia" - yepamusoro simbi
Shamwari yakanakisisa yevasikana iVelvet Depilation Cream
Pearl of Africa. Ndekupi zviri nani kuva nezororo muTunisia?
Group makambani "Auri". Feedback kubva mudonzvo uye nyaradzo basa
Kornik kubva pfupi pfupfu - inonaka uye yakanaka.
Sei kugadzirisa mapurasitiki aenzana nomazvo.
Stratosphere - chii ichi? Kukwirira stratosphere
High Beach 4 *: (Krete): mifananidzo yezororo uye kuongororwa
Albert Bierstadt - painter of American West
Domain zvikamu. The mazita Domain zvikamu